Paris Saint Chermain Oo Markale Soo Cusbooneysiisay Xiisihii Hector Bellerin.
HomeHoryaalka FranceParis saint chermain oo markale soo cusbooneysiisay Xiisihii Hector Bellerin.
February 23, 2021 Horyaalka France, Suuqa kala iibsiga, Wararka Ciyaaraha Maanta 0
Paris Saint-Germain ayaa diyaar u ah inay dib u cusbooneysiiyaan xiisaha ay u qabaan daafaca midig ee Arsenal Hector Bellerin xagaaga.
Kooxda reer France ayaa dalab u dirtay xiddiga reer Spain ka hor bilowgii xilli ciyaareedkii hore waxayna soo bandhigeen € 35million (£ 30m), taasoo Gunners ay diiday madaama ay doonayeen Lacag lamid ah 50 milyan euro (£ 43m).
Bellerin ayaa sidoo kale lala xiriiriyay labo naadi oo Serie A ah iyo sidoo kale Barcelona wuxuu jeclaan lahaa inuu u wareego caasimada Faransiiska maxaa yeelay wuxuu dareemay fursadiisa ah inuu ku guuleysto koobab badan oo ay ka weyn yihiin Imaaraadka, iyadoo Mikel Arteta uu ugu dambeyntii ka dhaadhiciyay 25 jirka inuu sii joogo waqooyiga London waxa uu yahay xilli ciyaareedkiisii ugu horreeyay ee tababare Mourica Pochetinno.
Laakiin hadda CBS Sports ayaa soo warinaysa in kooxda reer France, oo ay haatan maamulo tababarihii hore ee Tottenham Mauricio Pochettino, ay qarka u saaran yihiin inay mar kale riixaan dhamaadka ololaha haatan socda.
Iyadoo Arsenal ay soo bandhigtay horumar yar xilli ciyaareedkan, isreebreebka Champions League markii ugu horeysay seddex xilli ciyaareed ayaa u muuqda mid fog, iyadoo kooxda ay 11 dhibcood ka sareyso afarta sare ka dib guuldaradii 1-0 ee ka soo gaartay Manchester City axadii.
Bellerin ayaa qeybtiisa si fiican u ciyaaray xilli ciyaareedkan, isagoo 27 kulan u saftay kooxdiisa inkastoo uu wajahay xoogaa tartan ah booskiisii ah oo uu kala kulmay xidiga ka yimid kooxda Southampton Cedric Soares horaantii xilli ciyaareedka.
Qaab ciyaareedkiisa ayuu helay markii ugu horeysay tan iyo 2016 markii uu ka qeyb qaatay barbaro 1-1 ah oo ay la galeen xulka Holland bishii November ee lasoo dhaafay.
Waxay u egtahay in Bellerin fursadiisa kaliya ee uu kula ciyaari karo horyaalnimada ugu fiican Yurub ee Arsenal 2021-22 ay tahay inuu ku guuleysto Europa League xilli ciyaareedkaan, iyadoo rajooyinka Arsenal ay isku dheelitiran yihiin ka hor kulanka wareega 32-ka, lugta labaad ee ay la ciyaarayaan Benfica. ka dib ciyaartii ugu horeysay ay la soo galeen Barbaro.